Real Madrid Oo Rajeyneysa Inuu Ka Tago Sergio Ramos Xagaagan
Home Wararka Ciyaaraha Maanta Real Madrid oo rajeyneysa inuu ka tago Sergio Ramos Xagaagan
Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay filayaan in Sergio Ramos uu ka tago kooxda marka qandaraaskiisa uu dhacayo dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Spain ayaa wadahadalo kula jiray Los Blancos si uu u kordhiyo heshiiskiisa ololahan, laakiin wadahadaladaas ayaa la rumeysan yahay inay gaareen xaalad cakiran .
Ramos ayaa lagu xantaa inuu codsaday seddex sano oo heshiis ah oo ku saabsan mushaarkiisa haatan, taasoo Madrid – oo ku jirta dhimista kharashka aysan awoodin kooxda.
Sida laga soo xigtay El Chiringuito wariyaha Josep Pedrerol , Madaxda Madrid ayaa hadda aqbalay in 34-sano jirka loo ogolaaday ka tagista Santiago Bernabeu dhamaadka suuqa kala xagaaga.
Paris Saint-Germain ayaa si weyn loogu tixgeliyaa inay tahay kooxda ugu cadcad inay si xor ah kula soo wareegto Ramos, iyadoo u maleyneysa inay u soo bandhigtay qandaraas uu ku kacayo 15 milyan euro ((13.26m) xilli ciyaareed seddexda sano ee soo socota.
Previous articleWararka Suuqa kala iisbiga iyo Wargeysyada Yurub ee Caawa: Man City oo ku dhow Fluminense Kayky iyo Metinho iyo Qodobo kale
Next articleManchester United oo la siiyay fursad ay kula soo saxiixato Edin Dzeko